Baro Sida Muuska Loogu Qurxiyo Jidhka - Daryeel Magazine
Baro Sida Muuska Loogu Qurxiyo Jidhka
Inta badan waxa jira Daraasaado wakhtiyo kala duwan lagu ogaado waxyaabo badan oo qarsoonaa hadaba akhriste maxad ka ogtahay In uu Muuska yahay shayga Ugu fiican ee aad Jidhkaaga Ku Habyn Karto Soona Saraya Quruxda Jidhkaga.
muusku wuxu leeyahay faa`idooyin badan iyo fiitamiino caawinaysa maqaarka dadka, kana dhigaya mid jilicsan oo dabacsan, sidaa darteed waxu kaa cawinayaa in aad quruxdaada ku ilaaliso isticmaalka muuska.
Shirkadaha Caalamiga ah ayaa soo ban dhigay hada in uu Muuska yahay shayga Ugu fiican Dhinaca Qurxinta Jidhkagag loo adeegsan karo (natural pant) waxana tijaabo ku sameysay shirkadaha dalka Engiriiska qaarkood.
Habka loo isticmaalayo muuska jidhka lagu qurxiyo:
-Xeelad kale: soo qaado muus bisil kadib ku rid baaquli, ku burburi qaado kadib ku dar hal qaado oo malab ah iyo hal qaado oo liin dhanaan ah, isku qas. Wajiga iska maydh dabadeedna shukumaan ku qallaji. Wajiga saar muuski, liintii iyo malabkii aad isku qastay adigoo isticmaalaya faro nadiif ah, hakuu saarnaado mudo 15 daqiiqo ah kadibna biyo qandac ah isaga maydh. Waxaa uu wajigaaga ka baabi’inayaa dhibcaha madow iyo finanka isagoo ka dhigayaa mid dhalaalaya
-Si ilkahu kuugu cadaadaan, Sooqaado qobka muuska adigoo ku daligaya qeybtisa hoose ilkahaga muddo dhan laba daqiiqo, adigoo isticmaya caday ama burushka ilkaha. Ogsoonow in in macdanta ku jirta ee ay ka midka yihiin: magnesium, calcium, iyo potassium ay qayb libaax ka qadanayaan cadeynta ilkaha. Muusku waa midka mida qayraadka ugu balaran ee kabaxa dalkena.